Explainshell.com: webhusaiti yekudzidza nezve mirairo | Linux Vakapindwa muropa
Chimwe chezvinhu icho chinowanzo dhura zvakanyanya kana zvasvika kune * nix nyika mirairo yayo. Dzidza vese avo mirairo, hunhu uye sarudzo inogona kuve yakaoma dzimwe nguva. Uye zvakare, mirairo isingawanzo inofanira kushandiswa kazhinji, saka inenge isingazivikanwe kunyangwe kune avo vatove veteran.
Kana iwe uine matambudziko nemirairo iyi, kuwedzera kune inonakidza Wikis yehuwandu hwemapurojekiti, uye zvese zvidzidzo zvaunogona kuwana pamambure, pamwe nemapeji emurume, unogona zvakare kuwana zvimwe zvinobatsira zviwanikwa pamambure . Ndiyo nyaya ye anotsanangurahell.com, saiti iyo iwe yaunogona kuisa chero yeLinux raira uye iyo inodzosera tsananguro yekushandisa kwayo, sezvinoonekwa mumufananidzo wakaratidzwa wechinyorwa chino.
Sezvauri kuona, izvo zvandakaita kwaisuma muenzaniso kuraira, iyo mune iyi kesi yaive:
Uye kana uchidzvanya pane iyo Tsanangura bhatani, iyo inoratidza, sezvaungaona, mabhokisi maviri. Mumwe wavo anonongedzera kuchirongwa pachacho, mune ino echo. Uye kuregererwa kunoratidzwa, mune iyi nyaya inokuratidza kuti iwo murairo kuratidza mutsara wezvinyorwa.
Zvino pane bhokisi rechipiri rinonongedzera tambo yemavara chii chinotevera. Uye mune ino kesi zvakare zvinotsanangurwa kuti iyo tambo tambo inozoratidzwa kuburikidza neyakajairika kuburitsa, ndiko kuti, icharatidzwa pachiratidziri.
Uye pasi pezvese izvo, chinongedzo chinoratidzika icho chinonongedza iwe ku mapeji emurume, kana uchida rumwe rubatsiro. Uye, pamusoro, iwe unogona kubata paMusoro kuti uchinjire kune isina chinhu tema kana rima theme, kana uchida. Iwe unogona zvakare kuenda kune iyo saiti ye GitHub kana kuona ruzivo nezve chirongwa.
Ehe, iwe unogona kuyedza iyo mirairo iwe yaunoda, zvakare, kana iwe ukawedzera raira hunhu kana sarudzo, inozvitsanangurawo mune rimwe bhokisi. Uye kana sarudzo yacho isingaite, ini ndaizomaka nemubvunzo, izvo zviri kuratidza kuti sarudzo iyi haina kunaka.
Kana iwe uchida tanga kushandisa ichi chishandiso, iwe unofanirwa kudaro enda kune ino peji rewebhu. Iwe uchaona kuti iko kushandiswa kuri nyore kwazvo, uye kunogona kukubatsira iwe pazuva-nezuva-zuva hwaro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Explainshell.com: webhusaiti kuti udzidze nezve mirairo
Zvakanaka, asi kune avo vedu vasingazive Chirungu?
Dhatabhesi. Sumo pfupi kumusoro wenyaya